FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PORCELAINE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Porcelaine
Watson the Porcelaine amin'ny faha-6 volana
amerikana bulldog boston terrier mix
Ny anarana Porcelaine dia manondro ny palitaony mamirapiratra, izay mahatonga azy ho toy ny sarivongana porselana. Nandritra ny androny tamin'ny taona 1700, ny Porcelaine dia lehibe kokoa noho ny karazany maoderina ankehitriny. Alika tena miavaka izy io ary misy lohany voadio tsara, orona mainty misy vavorony ary valahana fisaka. Maizina endrika ivelany mamy ny masony. Ny sofina dia mahia, matevina ary maranitra. Lava sy mahia ny hatoka, ary mavesatra eo am-potony ny rambony fa miraikitra amin'ny teboka iray amin'ny farany. Ny hoditra dia tokony ho mavokely miaraka amin'ny mottling mainty kely izay miseho amin'ny akanjo fotsy. Avy lavitra dia manome endrika fitaratra manga fotsy izy io. Ny palitao fotsy henjana dia misy volo tena tsara dia lava amin'ny fahagagana. Ny lokony dia azo tapahina amin'ny teboka volomboasary amin'ny vatana, indrindra amin'ny sofiny miavaka sy lehibe.
Ny Porcelaine dia mpihaza mahery sy masiaka, fa malemy paika ao an-trano ary mora raisina. Tsara amin'ny alika sy ankizy hafa izany. Ity hound namana ity dia mavitrika ary tsy manam-pitsaharana miaraka amina fofona mahafinaritra sy feo mozika. Izy io dia hound ampiasaina amin'ny fihazana anaty fonosana ho an'ny karazana lalao bibidia rehetra. Satria ireto alika ireto dia miara-mihaza tsy misy baiko avy amin'ny tompony, dia lasa alika mahaleo tena izy ireo izay be herim-po sy be fiaraha-monina. Ity dia iray amin'ireo alika fihazana frantsay vitsivitsy izay naharesy ny faritry ny tanindrazany ary nampipoitra ny fahalianana any ivelany. Raha jerena ny hetsika sy ny fanatanjahan-tena mety dia olona mety ho an'ny trano izy io. Raha tsy misy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy / na ara-batana ity alika ity dia mety ho lasa avo lenta sy / na tsy azo idirana. Raha mahatsapa ny tompony dia tsy mahery saina toa ny tenany, ho lasa a somary niniana natao satria hino izy fa mila ilay mpitarika ny fifandraisana . Hiantsoantso amin'ny feo mampiahiahy izy io, fa tsy mpiambina mpiambina. Miorina aloha ny instincts mihaza. Ny alikakely, na dia valo herinandro aza, dia matetika mampiseho fihetsika manondro. Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina.
Haavony: Lehilahy 22 - 23 santimetatra (56 - 58½ cm) Vavy 21 - 22 santimetatra (53½ - 56 cm)
Milanja: 55 - 62 pounds (25 - 27,9 kg)
Ny Porcelaine dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano.
Ity karazana ity dia mila fanatanjahan-tena betsaka, ao anatin'izany ny isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jogging. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy asiana voditongotra eo anilany na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho olombelona.
fomba tsara indrindra hitandroana ny fahadiovana penina puppy
12-13 taona eo ho eo
alika karazany Pyrénées lehibe sary
Mora karakaraina ny palitao fotsy mamirapiratra.
Inoana fa izy no tranainy indrindra amin'ireo scenthound frantsay, ny Porcelaine dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Chien de Franche-Comté, taorian'ny faritra frantsay teo aloha izay mifanila amin'i Suisse. Taorinan'ny Tolom-piavotana frantsay (1789-1799), ohatra ny Porcelaine dia hita teo amin'ny sisintanin'i Franco-Suisse, izay nanjary fikorontananaana raha avy amin'ny frantsay na avy any Switzerland izy io. Na izany aza, ekena ho frantsay ny karazany, ary heverina fa avy amin'ny English Harrier, ny ankehitriny-lany tamingana Montaimboeuf , ary koa Laufhunds Suisse kely kokoa. Ny karazany dia voarakitra any Frantsa nanomboka tamin'ny 1845 ary tany Suisse nanomboka tamin'ny 1880, rehefa natsangana ny fonosana fihazana voalohany. Nisy fotoana taorian'ny Revolisiona frantsay dia nanjavona tokoa ilay karazany saingy 'namboarina' indray ary mijoro amin'ny tany mafy ankehitriny. Ny Porcelaine dia ampiasaina amin'ny fihazana ny bitro sy ny diera ao anaty fonosana ary any Frantsa no tena ahitana azy. Tsy fantatra any ivelan'i Frantsa, Suisse ary Italia izy ireo. Mihaza lambo koa (any avaratra) koa izy ireo.
Owen the Porcelaine, sary natolotry ny T.L.C. anaty tranon'alika
mpanjaka charles cavalier mainty sy fotsy
ohatrinona ny haben'ny azon'ny tertera voalavo?
sarinà bulldog anglisy